ပဈထားခံရခွငျးတှမှော အသားကလြာပါပွီ …. – One Daily Media
ပဈထားခံရခွငျးတှမှော အသားကလြာပါပွီ ….
သတိတရနဲ့ဖုနျးဆကျမယျ့အခြိနျကို စောငျ့ရငျး ဘယျလောကျကွာကွာနနေိုငျမလဲ ကြှနျမတော့ တဈညလုံးစောငျ့ခဲ့ဖူးတယျ သူချေါတဲ့အခြိနျကိုယျစောငျ့နတောနဲ့မကွုံတော့မှာစိုးလို့လေ … အိပျခငျြနရေဲ့နဲ့ သူချေါလာရငျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့စောငျ့ခဲ့ဖူးတယျ
ထူးပွီးတော့လဲ ဆကျမလာခဲ့ပါဘူး … ဒီလိုနဲ့ညနကျခဲ့ပေါငျး အိပျရေးပကျြရပေါငျးမြားခဲ့ပွီလေ … အလုပျမြားနလေို့နမှောဆိုတဲ့ အတှေးဖွညျ့တှေးကွညျ့ခဲ့ဖူးတယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျအခြိနျထိ ဖွညျ့တှေးပေးနနေိုငျပါ့မလဲ နညျးနညျးလေး ဖွဈဖွဈ ပွနျငဲ့ကွညျ့ခဲ့ရငျ ကြှနျမ အသားကလြာမှာမဟုတျဘူးလေ
အမွဲတမျးနှောငျ့ယှကျနတေတျတာ မဟုတျသလို အလိုကျတသိနဲ့တိတျဆိတျနခေဲ့ဖူးတာလဲ အခါခါပါ ဘယျအခြိနျထိပွောစရာစကားတှကေို မပွောပဲ ထိနျးခြုပျနနေိုငျပါ့မလဲ ပွောမိလိုကျတဲ့အခါမှာ ကိုယျက ပိုပွီး ကိုယျက အရေးမပါခဲ့မှနျးပိုပိုပွီးသိလာခဲ့တယျ
Good Night လို့ပွောမှ အိပျတတျတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျ ဒီတိုငျးအိပျပြျောသှားဖို့ဆိုတာ တျောရုံတနျရုံအိပျပကျြခဲ့တာမဟုတျဘူး တဈခါတဈလမှေ လိုခငျြနပေမေယျ့လဲ မပေးနိုငျတော့မှနျးသိလာတဲ့အခါ မမြှျောဖွဈတော့ပဲ မမြှျောခငျြယောငျဆောငျလိုကျပွီးပဲ နလေိုကျရုံပါ
အရငျတုနျးကလို ငိုမနဖွေဈတော့သလို အရငျတုနျးကလို မြှျောမနဖွေဈတော့ တဈနညျးအားဖွငျ့ သူ့ရဲ့ ပဈထားခွငျးတှမှော ကြှနျမ တဖွေးဖွေး နသေားကလြာပါပွီ …
ပစ်ထားခံရခြင်းတွေမှာ အသားကျလာပါပြီ ….
သတိတရနဲ့ဖုန်းဆက်မယ့်အချိန်ကို စောင့်ရင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်မလဲ ကျွန်မတော့ တစ်ညလုံးစောင့်ခဲ့ဖူးတယ် သူခေါ်တဲ့အချိန်ကိုယ်စောင့်နေတာနဲ့မကြုံတော့မှာစိုးလို့လေ … အိပ်ချင်နေရဲ့နဲ့ သူခေါ်လာရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စောင့်ခဲ့ဖူးတယ်
ထူးပြီးတော့လဲ ဆက်မလာခဲ့ပါဘူး … ဒီလိုနဲ့ညနက်ခဲ့ပေါင်း အိပ်ရေးပျက်ရပေါင်းများခဲ့ပြီလေ … အလုပ်များနေလို့နေမှာဆိုတဲ့ အတွေးဖြည့်တွေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်ထိ ဖြည့်တွေးပေးနေနိုင်ပါ့မလဲ နည်းနည်းလေး ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ငဲ့ကြည့်ခဲ့ရင် ကျွန်မ အသားကျလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ
အမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေတတ်တာ မဟုတ်သလို အလိုက်တသိနဲ့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ဖူးတာလဲ အခါခါပါ ဘယ်အချိန်ထိပြောစရာစကားတွေကို မပြောပဲ ထိန်းချုပ်နေနိုင်ပါ့မလဲ ပြောမိလိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်က ပိုပြီး ကိုယ်က အရေးမပါခဲ့မှန်းပိုပိုပြီးသိလာခဲ့တယ်
Good Night လို့ပြောမှ အိပ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဒီတိုင်းအိပ်ပျော်သွားဖို့ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံအိပ်ပျက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး တစ်ခါတစ်လေမှ လိုချင်နေပေမယ့်လဲ မပေးနိုင်တော့မှန်းသိလာတဲ့အခါ မမျှော်ဖြစ်တော့ပဲ မမျှော်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပြီးပဲ နေလိုက်ရုံပါ
အရင်တုန်းကလို ငိုမနေဖြစ်တော့သလို အရင်တုန်းကလို မျှော်မနေဖြစ်တော့ တစ်နည်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့ ပစ်ထားခြင်းတွေမှာ ကျွန်မ တဖြေးဖြေး နေသားကျလာပါပြီ …